Andohan’Ilakaka Ihosy : saron’ny zandary ny lehilahy iray nitady ankizy hakana taova | NewsMada
Andohan’Ilakaka Ihosy : saron’ny zandary ny lehilahy iray nitady ankizy hakana taova
Noraisim-potsiny ny lehilahy iray nitady ankizikely hakana taova hamidy tao amin’ny fokontanin’Andohan’Ilakaka Ihosy, afakomaly. Niresaka tamin’ny sefom-pokontany ao an-toerana izy fa hoe mitady ankizy hakana taova…
Mahoraka izaitsizy, tato ho ato, ity resaka halatra taova ity na eto an-dRenivohitra izany na any amin’ny faritra. Midika izany fa tena misy tokoa ity resaka halatra taova ity raha ny zava-nitranga tao amin’ny fokontanin’Andohan’Ilakaka, distrikan’Ihosy, faritra Ihorombe, afakomaly. Lehilahy iray no voarohirohy ho mpangalatra taova any amin’iny faritra iny. Teo am-pitadiavana ankizikely valo taona hakana taova hamidy no tratran’ny vela-pandriky ny zandary. Araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana, tonga tao amin’ny sefom-pokontanin’Andohan’Ilakaka ilay lehilahy ary niresaka taminy fa mitady ankizikely valo taona hakana taova. Taitra ilay sefom-pokontany ka tsy nisalasala fa nampandre avy hatrany ny zandary ao amin’ny tobim-paritr’Andohan’Ilakaka raha vao nandre ny fikasan’ity lehilahy ity. Nentin’ny zandary hanaovana fanadihadiana ilay lehilahy taorian’izay.
Tsy fantatra mazava, araka izany, ny momba sy/na ambadik’itony resaka halatra taova itony. Tsikaritra fotsiny, mitaintaina andro aman’alina ny mponina manoloana ity resaka hafahafa ity. Hatao inona ireny taovan’olona angalarina ireny? Raha ilaina amin-java-kafa, tsy maintsy taovan’olona ve no tadiavoina? Nanamafy ny mpitsabo iray amin’ny hopitaly iray lehibe eto an-dRenivohitra fa misy dingana maro arahina ny famindrana taovan’olona amin’ny olona tsy salama iray. Noho izany, tsy azo heverina fa hoe hafindra amin’olona ireny taovan’olona misy mangalatra ireny. Misokatra ny fanadihadiana.